အိုးဝေ: ဖြစ်သလိုလေး စားလိုက်တယ်
မီးဖိုချောင်ထဲက အဖိုးတန် ဆေးဝါးများ
သူများတွေ ဖြစ်သလိုစားတဲ့အကြောင်း ပို့စ်တင်တာတွေ့လို့ မဇနိလည်း ဖြစ်သလိုစားတာလေး တင်လိုက်ပါတယ်။
လုပ်စားဖြစ်တာတွေကတော့ ခေါက်ဆွဲကြော်ရယ်၊ ပဲပြုတ်သုတ်ရယ်၊ ချဉ်ပေါင်းဟင်းရယ်ပါ။
ခေါက်ဆွဲကြော်ကို တယောက်စာ မြန်မြန်လေးကြော်စားလိုက်တော့ ဒီပုံလေးအတိုင်းရပါတယ်။
ခေါက်ဆွဲအစိုဖတ်ကို ရေနွေးဖျောပြီး ရေစစ်ထားလိုက်တယ်။
ကြက်သားပြုတ်ကြော်လုပ်ထားတဲ့ထဲက လိုသလောက်ခွဲယူပြီး နွှာထားတယ်။
ကန်စွန်းရွက်ကိုသင်၊ ရေဆေး ရေစစ်ထားတယ်။
ဆီပူပူမှာ ကြက်သွန်ဖြူဆီသတ်ပြီး ကြက်သားနွှာထားတာကိုပါ ဆီသတ်တဲ့အထဲထည့်ထားတယ်။
ခဏမွှေပြီး ကန်စွန်းရွက်ထည့်ကြော်၊ ခေါက်ဆွဲဖတ်ပါထည့်ပြီး အတန်ကြာကြာလေးကြော်ပါတယ်။
ကြာညို့မကြိုက်လို့ မထည့်ပါဘူး။ ငံပြာရည်လိုသလောက်ထည့်တယ်။
ဒါနဲ့အတူ ရေနွေးကြမ်းသောက်ရင်စားဖို့ ပဲလည်းပြုတ်ထားတယ်။
ပဲပြုတ်ကို ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်၊ ကြက်သွန်နီလေးနဲ့ သုပ်လိုက်တယ်။
ပဲက မပြုတ်ခင် (၁) နာရီလောက် ရေစိမ်ထားလိုက်လို့ အနေတော်စားလို့ကောင်းပါတယ်။
ပဲပြုတ်လို့ရလာတဲ့ ပဲရေကိုတော့ အချဉ်ပေါင်းချက်စားဖြစ်တယ်။
လက်ပံခေါင်းခြောက်၊ ရုံးပတီသီး၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်ခြောက်၊ မျှစ်ခြောက်၊ သရက်သီးခြောက်နဲ့အတူ ငါးခြောက်သေးသေးလေးတွေပါရောပြီး ချဉ်ပေါင်းဟင်းချက်လိုက်တာ အတော်စားကောင်းပါတယ်။
ပဲပြုတ်ကလည်း မစားရတာကြာလို့လားမသိ (၂) ခါခွဲသုပ်တာ တခါထဲစားလို့ကုန်သွားရော။
Posted by ဇနိ at 6:08 PM
Labels: စားစရာ၊ သောက်စရာများ
PAUK October 4, 2008 at 6:32 PM
မောင်မျိုး October 4, 2008 at 7:55 PM
ကျနော် ပဲသုတ်အရမ်းကြိုက်တာ စားချင်တယ် ထမင်းပူပူလေးနဲ့စတော်ပဲ သုတ်လေး စားလိုက်ရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းးးးးးးးးးးးးးး
May Moe October 4, 2008 at 8:15 PM
ဟီး အ ချဉ်ပေါင်းဟင်း မစားဖူးဘူး ၊ အရမ်းချဉ်လားမသိ ခေါက်ဆွဲနဲ့ ပဲသုတ်က စားချင်စရာကြီး အချဉ်ကတော့ မီးမီးကြောက်ကြောက် :D
သံလွင် HeRo October 4, 2008 at 8:24 PM
khin oo may October 4, 2008 at 8:53 PM
တို့ရဲ့ဖြစ်သလိုကတော့မနက် က ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ်လေးချပ်နဲ့ ကာဖီတခွက်ပါ။ အဲဒါနေဲ့မဝလို. မဇနိရဲဖြစ်သလိုကို လာရောက် ငေးမော သွားပါတယ်. (ဟုတ်တယ်လေ ကုန်သွားပြါ့ပီဆိုမှ စားချင် ဦးလို့ရမလား နောက် တခါ များများ လုပ်ပါ.။)
mgngal October 5, 2008 at 2:36 AM
လာလိုက်ရင် ကုန်သွားတာနဲ့ ပဲတိုးနေတာပဲ ။ :((
နောက်ဆိုရင် များများလုပ်ထား။ ဒီလောက် ရောင်းအားကောင်းနေတာ မသိဘူးလား ။ :naa
ဒါပဲ ။ ပြောကို မပြောချင်ဘူး ။ ဒါပေမယ့် ပြောနေရတာပဲ။ :P
sin dan lar October 5, 2008 at 4:18 AM
လင်း October 5, 2008 at 6:33 AM
ချဉ်ပေါင်းဟင်းစားချင်တယ်။ စားလို့ ကောင်းမဲ့ပုံလေး ရှားရှားပါးပါး လက်ပံခေါင်းခြောက်လေးတောင်ပါသေးတယ်။
Republic October 5, 2008 at 7:01 AM
မမကွိ က ကန်စွန်းရွက် ကြိုက်တယ်နဲ့တူတယ် ၊၊အာရုံ ရတာ ၊၊ ရောက်တာနောက်ကျလို့ ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးပဲ သွားရည်ကျသွားတယ်ဗျာ ၊၊
အင်း ..ဒီလို ဟင်းတွေ မစားရတာကြာပီ မမကွိ ရေ ၊၊
Moe Cho Thinn October 5, 2008 at 10:18 AM
သူ့ ဖြစ်သလို ကလဲ တို့အတွက် နတ်သုဒ္ဓါ ပါလားဟေ့။
Anonymous October 5, 2008 at 7:39 PM
ဒီဘလော့ဂ်ကို လာရင် တခုခုစားပြီးမှ လာရတယ် မဟုတ်ရင် ဒုက္ခရောက်လွန်းလို့ ခုနက ထမင်းမစားရသေးခင် ၀င်အုံးမလို့ နောက်မှ သတိရပြီး ထမင်းစားပြီးမှ ၀င်ကြည့်တာတောင် ဂလု ဂလု ဖြစ်ပြီး ပြန်သွားရပါတယ်၊ တော်တော် နှိပ်စက်ပါ့၊
ဝေလေး October 6, 2008 at 11:23 AM
ပဲသုတ်လေးကောင်းမယ့်ပုံ.... ရေနွေးကြမ်းနဲ့သောက်. ရှယ်ပဲနေမယ်နော်. ခေါက်ဆွဲကြော်ကတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး ကြာဇံကြော်ပဲကြိုက်တယ် .. ကြာဇံကြော်ရင်ခေါ်နော်.... :P
ရှလွတ်... သွားရည်တွေအသာသိမ်း.... :P
nu-san October 7, 2008 at 7:40 AM
ဟွန်း.. ဖြစ်သလိုတဲ့.. မဇနိရဲ့ ဟင်းချက်ထားတာတွေကို ဒီက ရဲရဲတောင် မကြည့်ရဲဘူး.. သွားရည်တွေ ကီးဘုတ်ပေါ်ကျကုန်မှာစိုးလို့..:D အခုတော့ နေ့လည်စာ ထမင်းစားပြီးမှ လာလည်တာ.. ဒါတောင် ပဲပြုတ်သုပ်လေး စားချင်လိုက်တာ.. :D
မဇနိ October 7, 2008 at 5:37 PM
စားချင်စဖွယ်လေးဆိုလို့ ကျေးဇူးနော် ပေါက်
ထမင်းပူပူလေးနဲ့ ပဲသုပ် အမလည်းကြိုက်တယ် မောင်မျိုး
အရမ်းမချဉ်ပါဘူး ညီမငေး မေမိုးရယ်
လာလည်ရင် စားသွားနော် တူလေး သံလွင်HeRo
များများလုပ်မယ် မမကေအိုအမ်အတွက် နော်
လက်ပဲခေါင်းကို မစားဖူးဘူးလား sin dan lar ရေ။ အညာဘက်မှာတော့ ပေါတယ်
ချဉ်ပေါင်းဟင်းစားချင်တဲ့ လင်း အတွက် ချက်လိုက်တာပါ
ကန်စွန်းရွက် သိပ်ကြိုက်တာ ကိုကြီး ၀ီ ရ။ တယောက်ထဲ မနေနဲ့ ကိုကြီး ၀ီ ချက်ကျွေးမယ့်သူရှာ။
Anonymous ရေ မနှိပ်စက်ပါဘူးနော်
ကြာဇံကြော်ပီ ဝေလေး အခုလာတော့
မမနုစံ ပဲပြုတ်သုပ်လေးနဲ့ ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ ချစ်ချစ်နဲ့တူတူ စားပေါ့ဗျာ
Nika (4) - By V. Pelevin